वर्षको अन्त्यमा ठूलो खतरा! शक्तिशाली क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ आउँदैछ – Nep Stok
मंग्सिर २१, २०७८ मंगलबार 356
वर्षको अन्त्यमा, अन्तरिक्षबाट पृथ्वीतर्फ प्रकोप आउँदैछ। यसअघि सन् २०१८ मा यो प्रकोप पृथ्वीको धेरै नजिक पुगेको थियो । नासाको ए’स्टे’रो’इ’ड ‘ट्र्या’करले एस्टेरोइड २०१८ एएचको लम्बाइ कुतुबमिनारभन्दा साढे दुई गुणा लामो रहेको अनुमान गरेको छ । यदि यो जमिनमा कतै खस्यो भने, यसले ए’ट’म ब’म भन्दा ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ। यसबारे नासाका वैज्ञानिकहरूले कस्तो जानकारी दिएका छन् भन्ने बुझौं।
पृथ्वीतर्फ आउँदै गरेको यो क्षु’द्रग्र’ह २०१८ एएच १९० मिटर लामो अर्थात् ६२३ फिट लामो छ । अर्थात् कुतुबमिनारभन्दा साढे दुई गुणा अग्लो। कुतुबमिनार २३९ फिट छ। नासा ए’स्टे’रो’इ’ड ‘ट्र्या’क’रका अनुसार यो क्षु’द्रग्र’ह २७ डिसेम्बर २०२१ मा पृथ्वीको छेउबाट हुनेछ। पृथ्वीसँग ठो’क्किने सम्भावना नरहेको भएतापनि यो ठो’क्कि’एमा हिरोसिमा-नागासाकीमा खसेको आ’ण’वि’क ब’मभन्दा धेरै वि’ना’श हुनेछ ।
ए’स्टे’रो’इ’ड २०१८ एएच पृथ्वीबाट करिब ४५ लाख किलोमिटर टाढाबाट निस्कनेछ। सन् २०१८ मा यो पृथ्वीबाट २.९६ लाख किलोमिटर टाढाबाट बाहिर आएको थियो । यो पटक धेरै टाढा छ। तर यो दूरी अन्तरिक्षमा धेरै छैन, किनभने दिशामा एक डिग्रीको पनि फरक भयो भने खतरा बढ्न सक्छ। पृथ्वीबाट चन्द्रमाको दूरी ३.८४ लाख किलोमिटर अर्थात् यस क्षु’द्रग्र’हको दूरीको १२ औं भाग हो ।
सन् २०१८ मा यो पृथ्वीको धेरै नजिक गएको बेला वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका थिए । बत्ती नहुँदा त्यसको आगमनको जानकारी त्यतिबेला प्राप्त भएको थिएन । यो धेरै गाढा रंग को छ। सन् २०१८ यता यति ठूलो आकारको कुनै पनि क्षु’द्रग्र’ह पृथ्वीको छेउबाट गएको छैन।
सन् २०२८ मा एक किलोमिटर लामो ए’स्टे’रो’इड १५३८१४ (२००१ डब्लुएन५) पृथ्वीको छेउबाट भएर जानेछ तर त्यसबाट कुनैखतरा भने छैन । यसले करिब २.४९ लाख किलोमिटरको दुरी छो’ड्ने’छ। तर के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ यदि कुतुबमिनारभन्दा साढे दुई गुणा ठूलो ए’स्टे’रो’इ’ड २०१८ एएच पृथ्वीसँग ठोक्कियो भने के हुन्छ ?
Asteroid impact, computer artwork.
पृथ्वीमा खसेको अन्तिम क्षु’द्रग्र’हले रूसमा धेरै वि’ना’श ल्यायो। यो सन् २०१३ को कुरा हो । यो क्षु’द्रग्र’ह १७ मिटर थियो। यो रुसमा आयो र वायुमण्डलमा वि’स्फो’ट भयो। जसका कारण शहरका सबै भवनका झ्यालका सिसा फु’टे’का थिए। धेरै मानिस घाइते भए । यसअघि सन् १९०८ मा रुसमा वि’ना’श म’च्चा’एको उक्त क्षु’द्रग्र’ हो। यो पोडकामेनाया तुङसुका नदीमा खसेको थियो । जहाँ ठूलो खा’ड’ल बन्यो । यसलाई Tungsuka घटना भनिन्छ। तुङसुका घटना भएको क्षु’द्रग्र’ह २७ डिसेम्बर २०२१ मा पृथ्वीतर्फ आउँदै गरेको ए’स्टे’रोइ’ड २०१८ एएच बराबरको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ।
यदि Asteroid 2018 AH कुनै क्षेत्रमा हावामा वि’स्फो’ट भयो भने, यसले १२ मेगाटनको शक्तिको वि’स्फो’ट निम्त्याउँछ। यसले हजारौं किलोमिटरसम्म वि’ना’श नि’म्त्या’उँछ। यो हिरोसिमा-नागासाकीमा ख’सा’लेको आ’ण’वि’क ब’मभन्दा ८०० गुणा बढी श’क्तिशा’ली छ । हिरोशिमामा ख’सेको ब’मको शक्ति १५ किलोटन थियो । जबकि नागासाकीमा खसेको ए’ट’म ब’मको शक्ति २० किलोटन थियो ।
हिरोशिमामा ख’सेको ब’मले १.३५ लाख मानिसको ज्या’न’ लियो । अर्थात् यसको आधाभन्दा बढी जनसंख्या। तुङसुका घटनामा तीन जनाको ज्या’न गएको रिपोर्ट आएको थियो किनभने त्यो क्षेत्रमा धेरै मानिस बसोबास गर्दैनन्। तर उनको वि’ना’शको प्रमाण आज पनि देखिन्छ। तुङसुका कार्यक्रममा ८ करोड रुख र बिरुवा पूर्ण रुपमा धो’स्त’ भएका थिए । आवाज हजारौं किलोमिटर टाढा सुनिएको थियो। रुसमा भएको यो भूकम्पको ध’क्का वासिङ्टन र इन्डोनेसियासम्म महसुस गरिएको थियो ।
बैज्ञानिकहरुका अनुसार तुङसुका घटनाका क्रममा आकाश दुई रङमा परिणत भएको थियो । उत्तरी गोलार्धको आकाश आ’गो जस्तै चम्किरहेको थियो। आगोले आठ करोड रूख र बोटबिरुवा न’ष्ट गरेको थियो । त्यो पनि केही मिनेटमै । कसैले आकाशबाट धर्ती तर्फ तो’पको गो’ला हा’नेको जस्तो देखिन्थ्यो । तुङसुका घटनालाई आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रकोप घटना मानिन्छ।
नासाका अनुसार यदि कुनै क्षु’द्रग्र’हको व्यास १४० मिटरभन्दा बढी वा लम्बाइ छ भने त्यसले तुङसुका घटना जत्तिकै वि’ना’श निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ। क्षु’द्रग्र’ह 2018 AH 190 मिटर लामो छ। यसको मतलब थप वि’ना’शकारी हुने छ। समुन्द्रमा खस्यो भने विनाशकारी सुनामी र भूकम्प जाने सम्भावना रहन्छ । जसका कारण वरपरका देशका लागि ठूलो समस्या हुनसक्छ ।
Prevमध्यराति दुबई जान लागेका ७६ जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो
Nextनेपालबाट चोरी भएको ६ सय वर्ष पुरानो बुद्धको मूर्ति अमेरिकामा भेटियो
आज बन्दकाे घाेषणा भएपछि सरकारले बढायाे सुरक्षा सतर्कता